Gary Neville Oo Kashifay Sababta Ay Xanuun Ugu Tahay In Uu Daawado Liverpool -News and information about Somalia
Home Sports Gary Neville Oo Kashifay Sababta Ay Xanuun Ugu Tahay In Uu Daawado...
Gary Neville Oo Kashifay Sababta Ay Xanuun Ugu Tahay In Uu Daawado Liverpool
Halyeeyga Kooxda Man United ee Gary Neville ayaa la dhacsan qaabka uu Jurgen Klopp u horumariyay xiddigaha kooxdiisa.
Halyeeyga Man United ee Gary Neville ayaa qirtay in ay xanaan ku taahay in uu daawado kooxda la xafiiltanta kooxdiisii hore ay samaysay horumar cajiib ah intii uu joogay tababare Jurgen Klopp.
Liverpool ayaa ah kooxda kaliya ee ilaa haatan badisay dhamaan kulamadii ay ciyaartay premier League xilli ciyaareedkan kadib markii ay Gunners 3/1 uga badisay kooxda Arsenal.
Xiddigaha weerarka ah ee uu Klopp keenay ee Mohamed Salah, Roberto Firmino & Sadio Mane ayaa mar kale door muhiim ah ka qaatay bur-burinta kooxda Arsenal iyo waliba 3-da dhibcood ee muhiimka ah.
Neville ayaa horumarka ay sameeyeen 3-daas xiddig u arka mid cajiib ah tan ilaa markii ay ku soo biireen Anfield intii uu Klopp joogay kooxda.
“Liverpool ayaa 3 xiddig kula soo saxiixatay min 30 milyna oo euro una badashay 150 milyan oo euro mid kasta”ayuu Neville u sheegay Sky Sport.
“May ahayn kuwo fiican markii ay yimaadeen haatan waa kuwo heer sare ah”.
“Run ahaantii waa koox fiican waana arin xanuun badan igu ah in aad daawado shaqsi ahaan”.
Salah ayaa Ku dhawaaday in uu ku biiro Liverpool xagaagii 2014 laakiin waxa uu ku biiray Chelsea laakiin waxa uu ku fashilmay in uu boos ka helo iyada oo amaah loogu diray kooxda Roma kuwaas oo 2016-kii si toos ah ula wareegay.
Laakiin Liverpool ayaa sanad kadib gaar ahana xagaagii 2017 34 milyan kula soo saxiixatay isaga oo wixii intaas ka dambeeyay kooxda u dhaliyay 74 gool sidoo kale caawiye ka noqday 30 kale 197 kulan oo uu u ciyaaray.
Mane ayaa dhankiida Liverpool ugu soo biiray 34 milyan oo euro isaga oo kaga soo biiray Southampton isaga oo 21 gool u dhaliyay 67 kooxda Southampton kadib 10 milyan oo uu ugu soo biiray.
Dhanka kale Firmino ayaa dhankiisa qaab ciyaareed cajiib ah ku soo bandhigay intii uu Klopp yimid kooxda isaga oo 46 gool u dhaliyay 95 kulan.
Previous articleShaxda Laga Yaabo In Ay Barcelona Kula Ciyaaro Real Betis Kulanka Camp Nou
Next articleAgaasimaha Ciidamada Xoogga Dalka oo lagu dhaawacay Qarax lala beegsaday Gaarigeeda
WAR CUSUB: Kooxaha Waaweyn Oo Yurub Oo Doonaya In La Kordhiyo...
Barcelona Oo Guuldarro Waji Gabax Leh Kala Kulantay Granada Iyo Tababare...